Uyicwangcisa njani kwaye uyibize ngegama ngokungaziwayo- Ikkaro
yokuqalisa >> Ukhuseleko lwekhompyuter >> Bhrawuza ngummeli
Sineendlela ezi-3 zokukhangela ngokungaziwa okanye ukwenza ngathi sikwelinye ilizwe. Ngommeleli, kunye ne-VPN kunye ne-TOR. Nganye inezibonelelo zayo kunye nezinto ezingalunganga. Ukuba unomdla ndiya kushiya inqaku elibathelekisa.
Apha ndiza kuchaza indlela yokuhamba ngommeleli.
Ummeli yenye ikhompyuter esiyisebenzisayo njengomlamli. Xa sihamba ngummeli into esiyenzayo kukunxibelelana nenye ikhompyuter eya kuthi yenze izicelo kwiwebhu, ngale ndlela i-IP yethu "ayibonwa". Inokubeka ikhompyuter phakathi kwewebhu esifuna ukuyibona nathi. Kwaye ilula kakhulu, kuya kufuneka uqwalasele isikhangeli osisebenzisa kakuhle.
Ewe kunjalo unemingcipheko ethile yokhuseleko, ke andikukhuthazi ukufikelela kommeli kwiiakhawunti ezimeyile, iibhanki okanye iinkonzo.
Sele uyazi ukuba le mizekelo iza kuba ndifuna ukubona ukuba ziziphatha njani ezinye izinto ze-geolocation zeendawo zomsebenzi. Ngale ndlela ndinokuzenza ngathi ndingumntu ongena evela kwilizwe onomdla kum kwaye ndiyabona ukuba iiwebhusayithi zisebenza kakuhle.
Ndisebenzisa iFirefox, kodwa kulula kwiChannel.
Qwalasela inyathelo elibambekayo ngegunya lokumela
Into yokuqala ekufuneka siyenzile kukujonga ummeli wethu. Ngenxa yoko, kuya kufuneka wenze uphando kuGoogle kwaye siya kuba noluhlu oluninzi. Ndikhangele nje "ummeleli wasePortugal" elilizwe elinomdla kum.
Kumfanekiso sibona ezinye ii-proxies, kuya kufuneka sisebenzise idilesi ye-IP, izibuko kunye nomgaqo olandelwayo. Kukwabalulekile ukuthatha ingqalelo kwisantya, ukubakho kunye nokuphendula, ngakumbi ukuba uza kuyisebenzisa rhoqo.
Kukho umba wokungaziwa, uthatha isigqibo sokuba kubaluleke kangakanani ukungaziwa ukuba ungasisebenzisa
Ngoku siza kuqwalasela isikhangeli, kule meko iFirefox
Sivula ifayile ye- Imenyu> Ukukhetha
Kwaye kukhetho ngokubanzi, siza kuhla siye ezantsi oko kukuthi Useto lwenethiwekhi
Cofa kuseto kwaye uvule iwindow nge ubumbeko lonxibelelwano lwethu.
Ndikhethe i-ip yokuqala eneekawusi v4
Kubaluleke kakhulu ukuba xa uyeka ukusebenzisa ummeleli, tshintsha iisetingi ubuyele ku "Akukho proxy"
Ukuba umthetho olandelwayo wawungu-http, kuya kufuneka ukuba ugcwalise ifayile ye- Ummeli we-HTTP. Kulula kakhulu
Nje ukuba umiselwe kwaye wamkelwe, yiya kwinjini yokukhangela kwaye ufake enye yewebhusayithi ekuxelela indawo okuyo (eyip yam okanye yintoni ip yam) kwaye ujonge ukuba ikubonile ngokwenene ukuba ukwilizwe olikhethileyo kwaye i-IP yakho yokwenyani ayibonakali.
Ngale nto ndiyisombulule ingxaki yokuhamba ngokungathi ndikwelilizwe. Kwezi zinto zintathu sikhe sathetha ngazo, yeyona ndiyithandayo kukukhangela ngaphandle kokuchazelwa igama, kodwa kuhlala kulungile ukwazi ukuba kusebenza njani ukuba nezixhobo ezingaphezulu kunye nezixhobo kwaye sikwazi ukuzisebenzisa xa sinomdla kuzo.
izigaba Ukhuseleko lwekhompyuter Ukuhamba kwetikiti